မမသီရိ: March 2010
အလင်းတန်းနှစ်ခု ဖြတ်ကနဲ ဆုံခဲ့မိပြီးတဲ့အခိုက်.
အာရုံခံပြူတင်းက ဦးနှောက်ကို သတင်းပို့တယ်..
အဲဒီသတင်း လက်ခံပြီးတဲ့ ခဏ
ထိမ်းချုပ်ခန်းက ခလုပ်တွေ အလုပ်မလုပ်နိုင်မီခင်လေး
နှလုံးသား ဆီ ဒိုင်း။။ ကနဲရောက်..
ခြေ လက်တွေ အေးစက်ကုန်တယ်..
ထိုင်ခုံ နောက်မှီပေါ် ဖြည်းဖြည်းလေး မှီချ..
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်က လက်တွေ လျော ကျ...
ကမူးရှူးထိုး... Chat box လေးကိုကြည့်ပြီး
စကားလေး တခွန်းသာ ပြောနိုင်တော့တယ်..
Posted by မမသီရိ at 3/25/2010 05:24:00 PM
၁၂ လ ရာသီ
တနှစ်မှာ တရာသီ ဆိုင်းတယ်....
မိုးစက်တွေ က ...
တနှစ်မှာ တရာသီ ကြွေတယ်...
အလွမ်းတွေ ကျတော့ ..
ရာသီတိုင်း .ရိုင်းနေအောင် ပွင့်..လို့...။
Posted by မမသီရိ at 3/18/2010 06:56:00 PM
မေမေ သာ စိတ်မရှည်လို့ကတော့
မမ က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လှပခဲ့မလဲ မေမေရယ်
လွမ်းနေရပေမဲ့ မမ ပျော်ပါတယ် မေမေ
ပန်းကလေးတွေ ဖူးပွင့်အောင် လုပ်ခွင့် ရခဲ့တယ်
ဘ၀ ဟာ နေပျော်လို့
မမ က လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါတယ် မေမေ
ဒီလောကကြီးထဲ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အတွက်
Posted by မမသီရိ at 3/15/2010 11:04:00 AM
မင်းက မချစ်ပါနဲ့ ကွယ် ဆိုတိုင်း..
မင်းကမချစ်ပါနဲ့ ကွယ် ဆိုတိုင်း..
ငါ့ အသဲနှလုံး က ကွန်ပျူတာ တလုံးမှ မဟုတ်တာကို....
ဖျက်ချင်တဲ့အခါ ဖျက်လို့ ရတဲ့
ပရိုဂရမ် တခုဖြစ်ခဲ့ ရင်တော့ တမျိုးပေါ့ ချစ်သူရယ်...
လူထူထူ လမ်းမပေါ် ရောက်တော့
ဆံပင်ရှည်ရှည်.. စမတ်ကျကျ ကောင်လေးတွေ
မင်း ဖြစ်နေမလား... ရင်ခုန်ရင်း ငေးမိ...
(တကယ်တော့ မင်းက စမတ်ကျသူလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့..)
အရောက်ပျောက်လု ခုံ တန်းလေးပေါ် ထိုင်ခိုက်
ကိုယ့်ပုခုံးကိုများ တယောက်ယောက် လာဖက်လေသလား..
ကယောင်ချောက်ချား ထင်မှတ်မှားမိ.တာ က ခဏခဏ
အဲဒီတယောက်က မင်းကလွဲ လို့ ဘယ်သူ ဖြစ်အုံးမလဲ..
ပြုံးပြုံးကြီး နဲ့ ငါ့ကို..
ငါ အလုပ်လုပ်တာ ထိုင်စောင့်ကြည့်နေတာ
မင်းပဲ မဟုတ်လား ချစ်သူလေး ရဲ့..
မင်းက နေ၀င်ရာ အရပ်ဆီမှာ ရှိတယ်
ငါ နေထွက်ရာ အရပ်ဆီမှာ ရှိတယ်..
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လုံးနေတော့.. ငါတို့ ဘယ်မှာဝေးလို့လဲ..
မင်းက ညတွေကို မုန်းတယ် မုန်းတယ် ပြော၇င်း
အဲဒီညတွေ ကို ဖက်တွယ်ထားတယ်
(အိပ်မပျော်ဘူး..လို့..ငါ့ကို ပြောခဲ့တာ ခဏခဏ)
ငါက လရောင်တွေ ကို ချစ်တယ်.. ချစ်တယ်.. ပြောပြီး
အဲဒီ လရောင်အောက်မှာ ငို ငို နေတတ်တယ်
(မင်း ကို လွမ်းလို့..)
မင်း ဆီမှာ တခါ သာ.. ငါ့ ဆီမှာ တခါ သာတဲ့
တခုသော လမင်းရဲ့ အရှေ့
မတိုင်မပင်.. မရွံ့ မဆုတ်..
ချစ်တယ်.. လို့ ပြိုင်တူပြောဖြစ်ခဲ့တာ
မင်းနဲ့ ငါပဲ မဟုတ်လား ကွယ်...
မင်းက ဂစ်တာ တီးရင်း. ငါ့ကို လွမ်းနေခဲ့ တယ်..
ငါက ကဗျာတွေရေးရင်း.. မင်းကို လွမ်းနေခဲ့တယ်..
မင်းရဲ့ ညတွေ ကို ငါ့အလင်းတွေ နဲ့ ထွေးပွေ့လို့..
ငါ့ ရဲ့ နေ့တွေ ကိုတော့ မင့် သီချင်းတွေ နဲ့ ရင်ခုန်စေခဲ့တယ်..
ဒါနဲ့များ... မင်းမို့ ပြောရက်တယ်..
အဲသလို ရရိုးလား ချစ်သူ ရဲ့...
ငါ့ အသဲနှလုံး က ကွန်ပျူတာ တလုံးမှ မဟုတ်တာကို......။
Posted by မမသီရိ at 3/11/2010 08:17:00 PM
ကာရံတွေညှိပေးရုံကလေးပါ လို့ တွေးကြည့်ပေးပါလား..
ကောင်းကင်ပြာလို့ သူ ပြာတာပါတဲ့
တိမ်တွေ ကွာလို့ သူပြာတာပါ တဲ့...
မင်းလွမ်းရအောင်လို့ ငါ တိုက်ပေးတာမှ မဟုတ်တာတဲ့..
မင်း တမ်းတခြင်းအတွက် ငါတို့ ပွင့်ပေးတာမှ မဟုတ်တာတဲ့...
ကျမ က သူ့ ကို.. လွမ်းချင်လို့ လွမ်းတယ်
လေနုအေး ကြောင့် လွမ်းတယ်.
လေနီ ကြမ်းကြောင့် လွမ်းတယ်..
ပန်းအဖူးတွေ ငုံလို့ လွမ်းတယ်..
ပန်းအပွင့်တွေ စုံတော့လဲ လွမ်းတယ်..
ချစ်ခွင့်ရခြင်း အစုံ နဲ့ သူ့ ကိုချစ်တယ်...
ခြုံပုဝါလေး ခြုံရင် သူ့ ရင်ခွင်လို့ တွေးတယ်..
ပါးပြင်ပေါ် လေဝှေ့အရမ်း.. သူ့ အနမ်း လို့ မှတ်တယ်..
အိပ်မက်ထဲ မှာ .. သူ အလည်လာလို့ ပျော်တယ်..
နှစ်ဦးသား ဆုံမဲ့ ရက် .. လက်ချိုး တွက်ရင်း အသက်ရှင်တယ်
ကဲ... ကောင်လေး ..... မင်း ပြောအုံးမလား...
Posted by မမသီရိ at 3/06/2010 09:14:00 AM
တမိသားနဲ့တမိသား အတူတူနေကြဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘ၀ကိုလက်တွဲ လျှောက်ဖို့ အတွက် နောက်ခံသမိုင်းလေးတွေ အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ တချို့က တယောက်နဲ့တယောက် နှစ်နှစ်လိုလို မေတ္တာ သက်ဝင်တာမို့ အတူတူ နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြသလို၊ တချို့ကျတော့ မိဘ မောင်ဘွားတွေရဲ့စီစဉ်မှုကြောင့် ကိုယ်တိုင်သဘောကျသည်ဖြစ်စေ၊ သဘောမကျသည်ဖြစ်စေ အတူတူနေကြဖို့ သဘောတူရတယ်။ တချို့က အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မေတ္တာ မရှိသော်လည်း အတူတူနေဖြစ်ကြရတယ်။ တချို့ကျပြန်တော့ ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ပဲ အိမ်ထောင်ကျတတ်ကြပြန်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပဲ အတူတူ နေကြသည်ဖြစ်စေအုံး တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ကြင်ဖော်ကြင်ဖက်တွေဟာ လမ်းခွဲဖို့ ကိုတော့ ဘယ်သူမှ အလွယ်တကူ စဉ်းစားကြမယ် မထင်ပါဘူး..
အိမ်ထောင်ဖက်ရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် မိသားစု ဘ၀ ဆိုတာတွေ ရှိလာပြီးတော့ တခြားသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်မှီခိုအားကိုးလိုမှုတွေ၊ ဖေးမ မှုတွေနဲ့ သံယောဇဉ်တွေ နွယ်ဆက်လာပြီမို့ ခွဲခွာကြဖို့ ဆိုတာအတော် ကြိုးစားရမဲ့ အမျိုးပါ..။
အထူးသဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်ပြုပြီးပြီဆို ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း တဘ၀ လုံး နှစ်မြှုပ်ပေးဆပ်တတ်ကြတာမို့ .. အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး၊ ဤသုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင် နောင်ပြင်ရန်ခက်သည့် အမျိုး ရယ်လို့ ရှေးလူကြီးသူမတွေက စာဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ထင်ရဲ့နော့။ . အနောက်တိုင်းကလူတွေ လက်မထပ်ပဲ အတူနေ၊ ကလေးမွေးကြတာ၊ အဲဒီအတူနေတဲ့ကာလမှာ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာမျိုး၊ အစေးမကပ်တာမျိုးတွေ ရှိလာရင် အလွယ်တကူ ပြန်ခွာလို့ ရအောင်ထင်ပါရဲ့..။ အဲသလိုမျိုးက မြန်မာပြည်မှာတော့ ရအံ့ မထင်.. တိတ်တိတ်ပုန်းသာ မဟုတ်ခဲ့ရင် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ အရ ပုဆိုးတန်းတင် ရင် အကြင်လင်မယား ဖြစ်သလိုပဲ၊ ရပ်ကွက်ထဲ ကျေးရွာထဲ အရှေ့ ၇ အိမ်၊ အနောက် ၇ အိမ် က ဒီလူနှစ်ယောက် အတူတူနေကြပြီလို့ သိသွား ရင် အကြင်လင်မယား အရာမြောက်တာမို့လေ..။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လောကကြိးရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး လူသား နှစ်ယောက်ဟာ နှဖူးစာ မင်ရည်ကျဲလာတဲ့ တနေ့၊ တယောက်အပေါ် တယောက် အကြောင်းအမျိုးကြောင့် စိတ်ကုန်လာတဲ့ တနေ့၊ ဘယ်လိုမှ အတူတူနေကြဖို့ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ နှစ်ယောက်လုံးက ယူဆလာတဲ့ နေ့မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြား ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကွာရှင်းမှုတွေ ကွဲကွာမှုတွေ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။
တချို့တွေက အဲဒီ ခွဲခွာခြင်းကို အလွယ်တကူပဲ ဖြတ်ကျော်ကြပေမဲ့၊ တချို့ကျတော့လဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်လွှားကြရတယ်။ ဆုံးဖြစ်ချက်တွေချ ဖို့ အချိန်တွေ နှစ်ချီပြီးစောင့်စား ကြသလို တချို့ကျတော့လဲ တထိုင်တည်း၊ တချက်ထဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကွာပစ်လိုက်ကြတာမျိုး..။
ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲမှာ လက်ထပ်ခြင်း အနုပညာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတခု တင်ထားဖူးတာမို့.. ခု တခါ တော့ ဖော်ဝါ့ဒ်မေးလ် ထဲ က ရလာတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာ တချို့က စုံတွဲတွေ ရဲ့ ခွဲခွာပုံ နည်းလမ်းလေးတွေ ပြန်လည်ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်...။
ကမ္ဘာပေါ်က ချစ်သူစုံ တွဲတိုင်းဘယ်သူ့ကိုမှ နာကျင်စွာ မခွဲခွာစေချင်ပါဘူး..။
တကယ်လို့ မိန်းမဖက်က အရင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းပြီးနောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုခဲ့ရင်နောက်ယောက်ျားက
အရင်ယောက်က်ျားကို မင်္ဂလာစရိတ်နှစ်ဆလျော်ရတယ်။ တကယ်လို့ ယောက်ျားဖက်က
အရင်ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့ရင်မိန်းမနောက်အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ နောက်ယောက်ျားက
အရင်ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမတို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာစရိတ်ကို ပေးလျော်ရပါတယ်။
ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမ တစ်ယောက်ယောက်ကကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိုင်တယ်။ တကယ်လို့နှစ်ဦး
လုံးပြိုင်တူကွာရှင်းခွင့်တောင်းခဲ့ ရင် အတည်မပြုဘူး။
မိသားစုရိုးရာမှာ မိန်းမဖြစ်သူက အပြင်မထွက်ခင် လင်ယောက်ျားရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုယူရတယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့မှာ ယောက်ျားက မိန်းမကိုမလိုချင်တော့တဲ့အခါအပြင်ထွက်မယ်လို့ မိန်းမခွင့်လာတောင်းတဲ့အချိန် "သွား.. အိမ်ပြန်မလာနဲ့တော့" လို့ပြောပြီး ကွာရှင်းလို့ရပြီဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ မချစ်မနှစ်သက်ကြတော့တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာရုံးကိုသွားပြီးကွာရှင်းခွင့် တောင်းနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ နွားတစ်ကောင်ဝယ် သတ်ဖြတ်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုး၊ မောင်နှမတွေခေါ်ပြီး စားသောက်ရတယ်။ စားသောက်ပြီးရင်ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး တစ်ယောက်ကိုပါး(၁ဝ) ချက်စီရိုက်ရတယ်။ပါးရိုက်ရတာက နောက်ဆုံးနာကျင်ခြင်းကို မှတ်ယူစေဖို ဖြစ်ပြီး ရိုက်ပြီးရင်ကွာရှင်းခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ကွာရှင်းချင်ရင်(၃)ရက်အစာငတ်ခံရတယ်။ အစာငတ်ခံပြီး (၄) ရက်မြောက်မှာဒေသခံအသက်ကြီး သူတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး
အင်အားရှိမရှိအစစ်ဆေးခံရတယ်။ တကယ်လို့ အားမရှိတာမှန်ရင် ကွာရှင်းခွင့်ပေးတယ်။
လိမ်ညာနေတယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ တစ်သက်လုံး ကွာရှင်းခွင့်မပေးတော့ဘူး။
(စာဖတ်သူတွေ သိနေတဲ့ နီုင်ငံတကာက ကွာရှင်းခြင်း ပုံစံလေးတွေ လဲ ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံး..)
Posted by မမသီရိ at 3/03/2010 07:37:00 PM
မေမေ သာ စိတ်မရှည်လို့ကတော့ မမ က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လှပ...